IArmenia Visa ekwi-Intanethi | I-eVisa yoKhenketho | natvisa.com
Isicelo se-Visa saseArmenia kwi-Intanethi
I-visa eya eArmenia ayimfuneko ukuba umhambi unqwenela ukuhlala kwiintsuku ezili-180 kweli lizwe ngokwekhalenda yonyaka. Umhambi kufuneka abe nencwadana yokundwendwela esebenzayo iinyanga ezi-6 ngaphaya kokuhlala kunye netikiti eliya phambili okanye lokubuya. Umntu unokufuna i-visa ukuba uya eArmenia ngenjongo ngaphandle kweshishini. Kukho isidingo sokugcwalisa iinkcukacha zesicelo sevisa seArmenia, esibandakanya iinkcukacha zeshishini, ezisisiseko kunye neenkcukacha zokuhamba. Ixesha lokulungisa i-visa yase-Armenia ekwi-intanethi ifikelela kwiintsuku zokusebenza ezi-3, emva koko umntu uya kufumana iVisa kwifom ye-pdf kwi-imeyile yakhe ayinikeziweyo.
Iindidi ze-Arisaia Visa
I-Visa eyodwa yokuNgena Imeyli Iinyanga ezi-3 okanye ezi-6 Ukuya kwi-21 okanye kwi-120 yeentsuku enye Faka isicelo ngoku
Ukuzimasa umsitho wezemidlalo
Abahambi kufuneka babambe ipaspoti eqhelekileyo esebenzayo a ubuncinci bexesha leenyanga ezintathu. Ipasipoti kufuneka kwakhona ibe nephepha elinye ubuncinci ukuze abasemagunyeni bayixhase ngalo ekufikeni kwakho. I-visa enye ivumela umenzi-sicelo ukuba aqhubeke ehlala kumhlaba wesizwe waseArmenia kangangeentsuku ezingama-21 okanye iintsuku ezili-120 ekungeneni kwakhe.
Ukufumana i-Visa yaseArmenia, kuyakufuneka unikeze amaxwebhu anjengala, a Ifoto yomenzi-sicelo, i ikopi evavanyiweyo yeenkcukacha zobuqu kwiphepha lakho lokundwendwela, isiqinisekiso senqwelomoya oyikhethile ukubhukisha ixesha lokufika kunye nokubuya kwitikiti, a ubungqina bendawo yakho yokuhlala kwaye isiteyitimenti sasebhankini kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
I-e-Visa eya eArmenia iyafumaneka kubahambi abanamanqaku okungena kule mida ilandelayo: EBavra, icandelo lomda womhlaba waseGogavan owabelana neRiphabhlikhi yaseGeorgia, Isikhululo sikaloliwe i-Ayrum, Iizikhululo zeenqwelomoya zaseZvartnots, I-Bagratashen, UMegri umda womhlaba kwabelwane nge-Iran. Abahambi abanendawo zokungena kwezinye iindawo ngaphandle kwale abayi kubonelelwa nge-visa ye-elektroniki.
Iinkcukacha ngendawo yokuhlala
Abantu abafaka isicelo seArhente ye-Visa yaseArmenia kufuneka babonelele ubungqina ngendawo yokuhlala yabo eArmenia. Abafakizicelo kufuneka babonise amaxwebhu aqinisekileyo okuba bayakuhlala phi, kanye xa sele bekulo lizwe. Ezi ndawo bahlala kuzo zinokuba iihotele ezibhalisiweyo, iimoto, indlu yeendwendwe, iikati okanye nayiphi na enye indawo bagqibe kwelokuba bahlale.
Iinkcukacha zeArmenia E-Visa
IArmenia lilizwe elinobutyebi ngenkcubeko kunye nelifa lemveli kwaye linike izipho ezininzi kwihlabathi. Oku kubandakanya iimvumi, abadlali, abadlali bezemidlalo, nokunye okuninzi.
Lilizwe elikufanele ukuba kuluhlu lwebhakethi lomntu wonke kwaye lityelelwe kube kanye ebomini bakho. Ungandwendwela ngokulula iArmenia zombini ukhenketho kunye neenjongo zeshishini ngaphandle kokuba uzalisekisa zonke iimfuno.
Nantsi yonke into oyidingayo malunga nesicelo se-eVisa saseArmenia kunye nendlela onokuyifumana ngokulula ngaphandle kwengxaki.
Isicelo seArmenia Visa
Ungayifumana ngokulula i-eVisa ukuba ufuna ukundwendwela eArmenia ngezi zizathu zilandelayo:
Ndwendwela ilungu losapho
Ukuzimasa kwinkomfa yenkcubeko
Ukuba ufuna ukundwendwela eArmenia ngazo naziphi na izizathu, unokufaka isicelo kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, xa kufuneka kufuneka ube namaxwebhu ambalwa akhoyo ekufuneka eyimfuneko:
Iinkcukacha zencwadana yokundwendwela
Iingxelo zebhanki okungenani iinyanga ezintathu (oku kufanele ukuba kube kutshanje)
Isiqinisekiso esivela kwindiza oceba ukusithatha
Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule ngala maxwebhu kukuba incwadana yakho yokundwendwela kufuneka ibe isemthethweni kangangeenyanga ezintandathu xa sele ufikile eArmenia. Kufuneka kwakhona ibe neliphepha elinye elingenanto ukuze ingagxitywa ngabasemagunyeni. Nje ukuba isicelo sakho sigcwalisiwe kwaye intlawulo yenziwe emva koko uya kufumana i-visa yakho kwi-imeyile yakho. Oku kuya kuprintwa ukubonisa xa ufika.
Ezinye izinto ezongezelelweyo ezifunekayo ukuze ufumane iArhente ye-Visa yaseArmenian:
Injongo yokutyelelwa kufuneka ibe kukuhamba kuphela kwaye kungabikho misebenzi yimbi.
Ukuba ibhalansi yebhanki inokwanela ukuxhasa zonke iindleko.
Amaxwebhu ayakuqinisekisa isizathu sokubuyela, kwilizwe lakho.
Ukuba awunangxelorekhodi yolwaphulo-mthetho.
Zimbini iintlobo zeevisa onokuthi ufake isicelo kuzo. Enye i-visa yokundwendwela esebenzayo kwiintsuku ezingama-90 kwaye iya kukubonelela ngento enye. Elinye ikwayi visa lokundwendwela elisemthethweni kwiintsuku ezili-180 kwaye likunye nokungena kube linye.
Khumbula, nantsi imali yesicelo oza kuyibhatala kwi-Intanethi. Nje ukuba ufikelele eArmenia wonke umkhweli kufuneka ahlawule i- $ 33 yee-visa zeentsuku ezili-180. Abantu abane-visa yeentsuku ezingama-90 kufuneka bahlawule iidola ezisi-7 xa befika.
Khumbula ukuba nokuba yonke into ihamba kakuhle kwaye nesicelo sakho senziwe kodwa akufika e-Armenia kuxhomekeke kwabasemagunyeni ukukuvumela ungene elizweni okanye ungahambi. Ukuba usisisongelo kukhuseleko okanye kwiminqweno yelizwe ke amagosa anelungelo lokwala ukungena kwakho.
Ngoku, nangona i-visa yemihla yamashumi asithoba isebenza ngokusemthethweni kwiintsuku ezingama-90 zonke awukwazi ukuhlala eArmenia ngaphezulu kweentsuku ezingama-21. Esi sikwindawo enye yokungena ukuze ungaphinde ungene kwi-visa enye.
Iindwendwe ezine-visa yeentsuku ezili-180, azinakuhlala ngaphezulu kweentsuku ezili-120 eArmenia. Le ikwiphepha elilodwa lokungena kwaye ngenxa yoko awunakukwazi ukungena kwakhona kwi-visa enye.
Umhla wokuphelelwa uya kunikwa kwi-eVisa yakho kodwa awukwazi ukwandisa ixesha lakho lokuhlala ngaphezulu kweentsuku ezingama-21 okanye ezili-120 ngokuxhomekeke kwi-visa yakho. Wakufika nje kuya kufuneka ubonise ipasipoti yakho kunye nevisa. Oku kungashicilelwa okanye kuboniswe kwifowuni yakho. Kukwakho nemfuneko yokugonyelwa i-yellow fever ukuze xa uhambela kwilizwe elinomngcipheko wokudlulisela kwityhefu etyheli kuyakufuneka ubonise ubungqina bokugonywa kwabasemagunyeni abafanelekileyo.
Yintoni onokuyilindela eArmenia
Indawo iya kukunika umbono okhangayo. Inembali etyebileyo, ukutya okumangalisayo oya kukukhumbula ngonaphakade, kunye nokuma komhlaba oguquguqukayo.
Lindela ukuba ibethwe ngumbali wobutyebi kunye nembono emangalisayo yale ndawo inokubonelela. Meyi ukuya kuJuni lelona xesha lilungileyo lokutyelela njengoko imozulu ilungile kwaye ungayihlola indawo ngokukhululekileyo ngaphandle kweengxaki okanye imozulu embi.
Isishwankathelo se-Armenia Visa
Ungalibali ukufezekisa zonke iimfuno ze-visa kwaye ugcine onke amaxwebhu akho elungile ngelixa usenza isicelo se-visa kwaye ungena e-Armenia. Nokuba yeyiphi na ingxaki encinci inokuthintela ukungena kwakho seso sizathu sokuba kubalulekile ukuba ube nayo yonke into kwasekuqaleni. Nje ukuba wenze kwaye ungene kwilizwe ukonwabele ukuhlala kwakho kwaye wenze unako nako.
Yintoni iArmenia eVisa?
Olu luhlobo lwe-visa evumela abahambi ukuba batyelele e-Armenia ngaphandle kokuya kwindlu yozakuzo okanye igqiza lokufaka isicelo se-Visa e-Armenia. I-Armenia eVisa ivumela abahambi ukuba bafake izicelo ze-Visa yabo kwi-Intanethi nakweyiphi na indawo emhlabeni kwaye bafumane namaxwebhu abo e-visa kwii-imeyile zabo.
Ndifuna ntoni ukufaka isicelo se-e-Visa yase-Armenia?
Ukuqala isicelo sakho seArmenia e-Visa, kuya kufuneka ube namaxwebhu angqina isazisi sakho, kwaye la maxwebhu abandakanya ifoto yakho (umenzi-sicelo), iphepha elineenkcukacha zakho kwipaspoti yakho (ikopi ehleliweyo), ubungqina bendawo Xa ufika e-Armenia, ubungqina beemali (ezengxelo zebhanki) kunye namatikiti endiza.
Ithini iindleko zokufumana i-e-Visa yase-Armenia?
Ixabiso le-e-Visa yase-Armenia liyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwe-visa oyicelayo. Amaxabiso aphulwe ngezantsi;
I-visa yexesha elifutshane- i-USD 7.00 (iintsuku ezingama-90) - I-visa yokungena kukhenketho olunye
I-visa yexesha elide - i-USD 33.00 (iintsuku ezili-180) - I-visa yokungena kubakhenkethi abangatshatanga
Ixesha lokulungisa eliqhelekileyo laziwa ngokuba yiMigangatho yokuSebenza, ethatha iintsuku ezisixhenxe (7) zeshishini.
IArmenia ye-Visa isebenza ixesha elingakanani?
Zimbini iintlobo ezahlukeneyo zeArmenia e-Visa- iiVisa zexesha elifutshane kunye nexesha elide. I-visa yethuba elifutshane inokubaluleka kweentsuku ezingama-90, kwaye unokuhlala ithuba elingaphezulu kweentsuku ezingama-21 ngelixa i-visa elide elinesiqinisekiso seentsuku ezili-180, kwaye ungahlala kangangeentsuku ezili-120.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ifumene ipasipoti yomfaki sicelo eArmenia e-Visa?
Xa usenza isicelo se-e-Visa yase-Armenia, kufuneka ube nencwadana yokundwendwela enobunyani beenyanga ezintandathu zomsebenzi ukusukela kumhla oceba ukufika ngawo kwilizwe. Ukuba ipaspoti yakho sele iphelelwe, yiya uyivuselele phambi kokuba ufake isicelo se-eVisa. Incwadana yokundwendwela kufuneka kwakhona ibe neliphepha elinye elingenanto ukulungiselela i-e-Visa yakho.
Mingaphi imingenelo evunyelwe yi-Armenia e-Visa?
I-Armenia eVisa yivisa yokungena enye ekuvumela ukuba uye eArmenia kube kanye. Nangona zimbini iintlobo-zexesha elincinci (ixesha elifutshane (90) okanye ixesha elide (iintsuku ezili-180), ezi ntlobo zimbini ze-eVisa zikuvumela ukuba ungene kwilizwe kanye kwaye uhlale iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezili-120 ngokwahlukeneyo.
Ndingasifaka nini isicelo se-e-Visa yase-Armenia?
I-Armenia eVisa ithatha phakathi kweentsuku ezintathu nezisixhenxe zomsebenzi ukuqhubekeka. Ke, sicebisa ukuba uqalise isicelo sakho kwangoko kangangoko kunokwenzeka, ngeentsuku ezisixhenxe ngaphambi komhla wakho wokuhamba. Oku kuya kukunika ngaphezulu kwexesha elaneleyo lokulungiselela uhambo kunye nokuvunywa kwe-eVisa yakho.
Ngaba ukufumana i-e-Visa kuyandiqinisekisa ukuba ndingene eArmenia?
Hayi, i-eVisa ayikuniki ngokuzenzekelayo ilungelo lokungena eArmenia. Izinto ezininzi zinokutshintsha kwizibuko lokungena ukuba igosa elihambelayo lithatha umnini we-visa njengesoyikiso kukhuseleko lukazwelonke okanye ukuba umnini we-visa akazonelisi zonke iimfuno zokufuduka.
Yintoni endifuna ukuyazisa xa ndifika eArmenia?
Xa ufika eArmenia, kufuneka uthambe i-Armenia eVisa ecaleni kwepasipoti yakho ukuze ihlolwe kwaye ingqinisisiwe. Ungayiprinta ngaphandle kweArmenia eVisa okanye ubonise amagosa ikopi ethambileyo yoxwebhu kwi-imeyile yakho. Kodwa kungcono ukuba uyiprinte ukuze wenze izinto ngokukhawuleza.
Iimfuno zokugonyela uhambo oluya eArmenia
Wonke umhambi ohamba evela kwilizwe elinomphakamo omde we-yellow fever kufuneka afumane isitofu sokugonyelwa i-yellow fever. Ke, ukuba ilizwe ovela kulo lijongana nomkhuhlane otyheli, kuyakufuneka uhambe uye kufumana isitofu sokugonya. Ukuze ufunde ngakumbi malunga neemfuno zokugonyelwa umkhuhlane etyeni eArmenia, jonga eli khonkco https://www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf.